လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ ရောင်းချတာအပြင် Internet နဲ့ Social Media ကနေပါ ရောင်းဝယ်လာကြပါတယ်… ဒီလိုရောင်းဝယ်ကြတာမှာ Customer အနေနဲ့ သူတို့သိလိုတဲ့ ပစ္စည်းအကြောင်းတွေ ၊ အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲ ဆိုတာတွေ ၊ ဝယ်လိုတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်း ရ ၊ မရ Confirm နေရတာတွေ ၊ ဘယ်နယ်တွေအထိ ပစ္စည်းပို့ပေးနိုင်လဲ ဆိုတာတွေ ၊ကိုယ့်ဆီ ဘယ်နေ့ပ စ္စည်းရောက်မလဲ အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကို တစ်ခါဝယ်ယူတိုင်းမှာ အမြဲ မေးနေရလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ❔❔❔
ဆိုင်ရှင်အနေနဲ့ကလည်း Customer တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ မေးခွန်းတိုင်းကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ဖြေနိုင်ဖို့ ၊ ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ဖို့ ဆိုတာကလည်း အကြီးမားဆုံး ပြသနာ တစ်ရပ်ပါပဲ။ ဒီလို Reply ကြာတာ ၊ Order တင်ရမယ့် ပုံစံ အဆင်မပြေတာ ၊ Checkout Process တွေ အဆင်မပြေတာတွေ ကိုကြုံတွေ့လာရတဲ့ အခါ Customer အနေနဲ့ ဒီဆိုင်မှာ ဆက်ပြီး ၀ယ်လိုစိတ် မရှိတော့တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ Customer တွေကို ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ⚠️⚠️⚠️
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဆီမှာ အနယ်နယ်အရပ်ကနေ ဝယ်မယ့် Customer တွေထပ်ထပ်တိုးလာဖို့ ၊ ကိုယ်ရဲ့ Brand က ဘယ်လောက်ထိ ခေတ်မှီ ဆန်းသစ်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနိုင်ဖို့ Digi-Zaay E-commerce Enabler Solutions နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗျ….🤝
Digi-Zaay Ecommerce Enabler Solutions နဲ့ တည်ဆောက်မယ့် E-commerce Store တစ်ခု ရဲ့ အားသာချက်တွေက? 🤔
✅ ကိုယ်ပိုင် Brand နဲ့ E-commerce Website , Mobile Applications တွေရှိနေခြင်းက Customer တွေ သင့် Brand အပေါ် ယုံကြည်မှု ပိုရှိလာစေပါတယ်။
✅ Customer တွေက E-commerce Website ,Mobile Apps နဲ့ Chatbots ကနေ အလွယ်တကူ အော်ဒါတင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✅ KBZ Pay , Wave Money စတဲ့ Digital Wallet တွေကနေ ပေးချေနိုင်သလို Bank Transfer (သို့) Cash On Delivery (ပစ္စည်းရောက် ငွေချေ ) နဲ့ပေးချေဖို့ကိုလည်း ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ်။
✅ အော်ဒါလက်ခံမှု အပိုင်းတွေကို အချိန်အကန့်သတ် မရှိဘဲ 24 /7Hours လုံး အလိုအလျောက် လက်ခံနိုင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✅ E-commerce တစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Business Data အားလုံးကို Centralized Dashboard ကနေ Manage ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Digi-Zaay E-commerce Enabler Package မှာ ဘာတွေ ပါဝင်မှာလဲ? 🤔
🔸 E-commerce Website
🔸 Mobile Applications (Android & IOS Apps)
🔸 Chat Bots
🔸 Facebook Shop Setup နဲ့
🔸 Data Management Dashboard တို့ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Digi-Zaay E-commerce Enabler Package တစ်ခုလုံးအတွက် ကုန်ကျငွေက? 🤔
April ကနေ May လအတွင်းမှာ Sign Up ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Setup Fee - $ 2000 ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ လစဉ်ကြေး ( ၂​ ) သိန်းကျပ် ပေးသွင်းရုံနဲ့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 🤗🤗🤗
စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဆိုင်ရှင် တွေအနေနဲ့ Digi-Zaay Contact Phone Number : 09257390595 ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗျ။ ☎️☎️☎️
Digi-Zaay ကို Software Solution Provider အဖြစ် လုပ်ငန်းပေါင်း ၄၀ ကျော်ကို Service ပေးခဲ့တဲ့ MM-Digital-Solutions က တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ E-Commerce လုပ်ငန်းကို ပိုမိုအောင်မြင်အောင် အထောက်အကူပေးနိုင်မဲ့ 2022 ရဲ့ Key Ecommerce Trends တွေက
Vietnam မှာ Social Media ပေါ်က ရောင်းဝယ်မှုတွေက E-Commerce Industry ကို ဘယ်လို အကျိုးပြုနေတယ် ဆိုတာ
လက်ရှိ ကျွန်​တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Social Commerce ကတစ်ဆင့် ရောင်းနေ၊ ဝယ်နေကြတာတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မြင်​တွေ့နေကြရပ...
(14) အကောင်းဆုံး Customer Service ကိုပေးပါ။